Ganacsatada Grasshopper Uganda Hadda lagama yaabo inay Maqan yihiin Dhaqdhaqaaqayaasha COP26
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Ganacsatada Grasshopper Uganda Hadda lagama yaabo inay Maqan yihiin Dhaqdhaqaaqayaasha COP26
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah
Sida Shirka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada ee lagu xaddidayo qiiqa kaarboonka illaa 1.5 digrii, oo loo yaqaan COP26, uu ka dhacay Glasgow intii u dhaxaysay Noofambar 1-12, 2021, iyada oo aanay ogayn hoggaamiyayaasha adduunku ee jooga, magaalo yar oo caan ah oo ka baxsan Magaalada Masaka ee Weyn, oo ku taal 130 kiiloomitir koonfur-galbeed Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, bulsho reer Uganda ah ayaa nolol maalmeedkooda ka raadsanayay gurashada Ayaxa ilaa iyo intii ay jirtay boqortooyadii Buganda tan iyo qarnigii 13-aad, oo ay ku jirto halka qabiilka Ayaxa ee loo yaqaanno “nsenene” uu yahay mid ka mid ah 52 qabiil ee deggan Buganda. .
Bukakata oo ku taal duleedka Masaka weyn ee xeebta harada Victoria, bulshooyinku waxay samaynayaan dil ka soo go'a cuntadan caanka ah inta u dhaxaysa bilaha roobabka ee May iyo November.
Waa marka ay ayaxa foostooyinkooda kala soo baxaan roobabka.
Waxay aad uga duwan tahay "Christmas-ka cad" ee Galbeedka, kaas oo lagu garto baraf da'o si loogu bishaareeyo xilliga.
Ugaandha waa ayaxa oo macno ahaan "baraf" samada ka soo "jiidaya" bulshooyin dhowr ah oo ka soo jeeda dadka waaweyn ilaa carruurta firfircoon ee si cayaaraya u goosanaysa dhaleeceyntan. Haddii Santa Claus (St. Nicholas) uu ahaa Ugaandha, xilligu waxay u badan tahay in la baabtiisay "Christmas-cagaaran."
Waxaa isa soo taraya in ganacsigu uu noqday ganacsi weyn iyadoo dhowr qof oo u dhashay dalka Uganda ay isticmaalayaan nalal dhalaalaya iyo qiiq ka soo baxaya cawska gubanaya si ay u damiyaan cawska habeenkii ah ee ku jaba go'a birta ah oo ay ku siibaan fuustooyin si ay u xayiraan ugana goostaan ​​raxan raxan ah. Tuulooyinkan ayaa ah kuwo aad u iftiimaya, iyadoo xilli habeen ah laga soo safrayay Kigali kuna sii jeeday Kampala, uu qoraagani si khalad ah ugu tilmaamay nalalka magaalada Masaka, balse uu ogaaday inay ahayd raxan ayax ah oo iftiinka soo jiitay, taasoo niyad-jab ku noqotay. dadka kale ee deggan.
Jawaan ka mid ah ayaxa ayaa waxa uu ka soo gadan karaa ilaa UGX 280000 (US$80) qiimaha jumlada ah ee magaalada Kampala halkaas oo ay aad uga dalbanayaan waratada waratada ah ee ka iibinaya dadka rakaabka ah ee taga suuqyada waaweyn ee magaalada. Bulsho badan oo ka soo jeeda Masaka waxay ku guuleysteen inay kor u qaadaan noloshooda, dhistaan ​​guryo, iyo xitaa inay carruurtooda ka baraan ganacsiga.
Waxa intaas dheer in marka la eego cilmi-baadhis ay samaysay Hay’adda Cuntada iyo Beeraha (FAO), cayayaannada la cuni karo waxay hagaajiyaan hab-nololeedyada, ka qaybqaataan sugnaanta cuntada iyo nafaqada, oo ay leeyihiin raad deegaan oo hoose marka loo eego ilaha kale ee borotiinnada laga helo hilibka lo'da, doofaarka, digaagga, iyo idaha.
In kasta oo caddaynta qiimaha nafaqadooda ay tahay ilo kale oo cunto ah oo nafaqo leh iyo deegaan ahaan waara, waddamo ay ka mid yihiin Maraykanka, Dawladaha EU, iyo UK dib uma hagaajin xayiraadaha si ay u oggolaadaan soo dejinta cayayaanka xitaa marka baakadaha loo dhoofiyo. Dhawr safar oo Afrikaan ah ayaa la kulmay kontaroolo adag oo soohdin ah kuwaas oo burburiya cunnadan qiimaha leh marka ay yimaadaan meelaha ay u socdaan iyaga oo ka cadhaysan. Hal mar, rakaab reer Uganda ah (magaca la qariyay) ayaa loo doortay inuu si nool u tuuro cawska qiimaha leh halkii uu u dhiibi lahaa iyaga oo yaaban shaqaalaha Kastamka Mareykanka, ma ahan ka dib markii uu u safray adduunka kala bar.
Waxa kale oo jirta cadaymo muujinaya in cayayaanku sii daayaan gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo Ammonia ka yar marka loo eego xoolaha caadiga ah taas oo ka dhigan 14.5% gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo, halkaas oo methane ka soo baxa xoolaha uu yahay dhibaato weyn oo boqolkiiba 16 ah, sida ay sheegtay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO. ).
Cayayaanka waxay u baahan yihiin qayb ka mid ah dhulka, mishiinada beeraha sida cagaf-cagafyada, sunta cayayaanka ama matoorada waraabka, waxayna ku koraan maalmo ka badan bilo ama sanado. Waxay isticmalaan tamar yar marka loo eego noocyada kale ee beeraha oo ah darawalka ugu weyn ee luminta kala duwanaanshaha noole ee caalamiga ah isla markaana qayb weyn ka qaata qiiqa hawada lagu sii daayo. Marka la eego saamiga 1 bini'aadamka ah ilaa 1.4 bilyan oo cayayaan ah, tani waa mid aad u weyn oo waxay noqon kartaa nafis nafaqeynta adduunka xitaa haddii loo adeego budo ama qaabab aad u macaan si loo badbaadiyo nolosha.
At COP26 Halka Greta Thunberg ay ka qayb qaadatay iyada oo ay weheliso dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa cimilada, Uganda Vanessa Nakate ayaa ku tilmaantay shir madaxeedka mid guul darraystay iyada oo leh "Iyadoo caalami ah oo ku saabsan dabbaaldegyada waqooyiga cagaaran."
Iyadu kama foga runta halka G20 aysan ku soconin hadalka inkastoo ay ku biirisay 80% CO2 qiiqa. Ilaa iyo inta cayayaanku aysan ku jirin liiska soo socda ee shirarka shirarka (sida loogu talagalay inay noqoto laakiin qaar ka mid ah dhalooyinka mamnuuca ah) si loogu daro escargot, sushi, iyo caviar - oo aad u baratay palette galbeedka, runtii waa guuldarro. Nakate ayaa intaa ku daray, "Taariikh ahaan, Afrika ayaa mas'uul ka ah kaliya 3% qiiqa qiiqa caalamiga ah, haddana Afrikaanka waxaa la kulma qaar ka mid ah saameynta arxan darada ah ee ay hurineyso xiisadda cimilada." Si kastaba ha ahaatee, waxay soo bandhigtay ereyo rajo ah, iyada oo soo jeedinaysa in isbeddelku dhici karo haddii dhaqdhaqaaqayaashu sii wadaan inay la xisaabtamaan hoggaamiyeyaasha waxyeellada cimilada.
Nasiib darrose, markii aan ku soo laabannay dalka Uganda ee Nakate, waxaa hoos u dhacay wax-soo-saarka cawska si uu ula mid noqdo saameynta xun ee isbeddelka cimilada ee ay sababto xaalufinta dhirta. Bukatata, dhul ballaaran oo gaaraya ilaa 9,000 hektar oo deegaan duurjoog ah oo hore u ahaan jiray kaymo iyo dhul daaqsimeed ayaa hadda ah beero cananaaska ah.
Kampala halkaas oo ayax ka soo dhici jireen ilaa 90-meeyadii, meelaha cagaarka ah iyo meelaha kaymaha ah ayaa fursad u helay in laga dhiso goobo ganacsi oo fidsan, dhismayaal dhaadheer, guryo guryo, iyo waddooyin.
Waxaa laga yaabaa in dib loo eego, safiir aan la garanayn oo u dhaqdhaqaaqa isbeddelka cimilada ee arrinkaas, waxay ahayd Lupita Nyong'o, oo ah ku guulaysta akadeemiyadda ee jilaaga taageerada ugu wanaagsan 2014, markii ay ku nuuxnuuxsatay dharkeeda furitaanka xafladda filimada Cannes ee "nsenene" ee Uganda ,” midabkeeda iyo nashqaddeeda baalasha u eeg iyo in dumarka Uganda ay ku ammaanaan hab-dhaqanka timaha.
Ilaa wakhtigaas, ganacsatadii Ugandha waxay ahaan doonaan kuwo aan mugdi ku jirin sida marinkooda Masaka ilaa qof ka socda G20 uu helo qoraalka.